Dagaal dhimasho iyo dhaawac gaystay oo maanta ka dhacay Beledweyn. – Radio Daljir
Dagaal dhimasho iyo dhaawac gaystay oo maanta ka dhacay Beledweyn.
Janaayo 26, 2010 12:00 b 0
Beledlweyn, Jan 26 ? Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimay in ka badan 16 kalana waa ay ku dhaawacan tahay dagaal saaka waabarigii ka qarxay magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan.
Dagaalkaan oo ahaa mid aad u xooggan ayaa u dhaxeeyey ciidamada Alhu-sunna Waljameeca oo gacan ka helaya maamulladii hore ee dawladda ee ka talin jiray gobolka Hiiraan iyo ciidamada ururka Xisbul-Islaam oo iyana gacan ka helaya kuwa ururka Al-shabaab.
Dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, ayaa la tilmaamayaa in uu gaystay khasaarooyinka dhimasho iyo dhaawac-ba iskugu jira oo soo kala gaaray dhinacyadii dirirtu u dhaxaysay iyo dad rayid ah oo rasaas habaw ahi ku haleeshay goobahooda.
Inta la xaqiijiyey illaa 7 qof ayaa dagaalka saaka iyo illaa maanta socday ku geeriyootay waxaana sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 16 kaleeto oo la sheegay in ay u badan yihiin xoogaggii dirirtu u dhaxaysay, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin tirada dhimasho iyo midda dhaawac maadama wali magaaladu ay tahay mid colaadeed oo isku-socodku uu yaryahay.
Garabyada ku dagaallamaya magaalada Beledweyn gacan ku haynteeda oo la hadlay saaxafadda ayaa guulo kala duwan sheegtay, waxaana saraakiil ka tirsan Alhu-Sunna oo ay la xiriirtay idaacadda Daljir ay sheegeen guulo in ay ka gaareen dagaalka, halka saraakiil kale oo ka tirsan Xisbul-Islaamna ay sheegeen in ay guulo waaweyn ka gaareen dagaalkii maanta walina ay gacanta ku hayaan magaalada.
Warar ka madaxbannaan sheegashada labada dhinac ee guulaha, ayaa sheegaya magaalada in ay wali gacanta ku hayaan isbahaysiga Xisbul-Islaam iyo Al-shabaab, inkastoo la tilmaamayo barakac iyo bubur xooggaan oo magaalada saameeyey.
Dagaalka maanta dhacay wuxuu bilawday kadib markii ciidamada Alhu-Sunna iyo kuwii maamulladii dawladdu ay u dhistay gobolkaasi ay saaka hiirtii waabari weerer ku ekeeyeen magaalada Beledweyn gaar ahaan fariisimo ay la haayeen ciidamada ururka Xisbul-Islaam, waxaana dagaalkaasi ka sii horreeyey mid kale oo maalintii shalay ka dhacay duleedka Beledweyn gaar ahaan farriisimo ay la haayeen ciidamada Alhu-Sunna.
Ciidamadii weerarka qaaday ee Alhu-Sunna Waljameeca, ayaa la soo sheegayaa in ay ku laabteen fariisimadoodii ay ku lahaayeen duleedka magaalada Beledweyn, waxaana maanta bartamaha magaalada qoorta looga gooyey labo nin oo maxaabiis ahaa kuwaasi oo laga qabtay Alhu-Sunna Waljameeca, waxaana madaxyadoodii laga soo lalmiyey meel fagaare ah oo ku dhaxtaallada magaalada Beledweyn.
Ma jiro wax dagaal ah oo haatan ka socda Beledweyn, hase ahaatee Inta badan dadweynihii magaalada Beledweyn ayaa ka cararay halkaasi, waxaana dadkii ka baxsaday dagaallada magaalada Beledweyn la tilmaamayaa in ku dhibaataysan yihiin duleeddada magaalada iyagoon haysan biyo iyo sahay ay deegaannadaasi ku sii joogaan.
Maalmihi ugu danbeeyey magaalada Beledweyn waxaa gacanta ku hayey isbahaysiga Al-shabaab iyo Xisbul-Islaam, waxaana ay iyaga lafsad ahaantoodu ay qabsadeen magaaladaasi dhawr maalmood ka hor kadib markii ay halkaasi kula dagaallameen ciidamada Alhu-Sunna Waljameeca.
4 qof oo ku dhaawacantay qarax ka dhacay Boosaaso & ciidanka oo baaritaanka ka wada halkii ay wax ka dhaceen.
Maamulka iyo dadweynaha degmada Cagaaran oo wada dhismaha waddo isku xirta Cagaaran iyo Bursaalax.